Mashiinka Biyaha ee Arduino: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Qalabka bilaashka ah
Bamka biyaha loogu talagalay Arduino: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Xaqiiqdii munaasabado badan oo aad u baahatay wax ka qabato dareerayaasha mashaariicdaada DIY ee aad la wado Arduino. Si tan ay suurtogal u noqoto, sameeyayaashu waxay leeyihiin tiro badan oo ah alaabooyin iyo qalab ay ku shaqeeyaan. Horeba waagii hore waxaan muujineynaa kuwa caanka ah matoorro, kaas oo aad ku xakamayn lahayd socodka dareeraha iyaga dhex maraya si fudud. Hadda waa markiisii ​​bamka biyaha ...
Isticmaalka kuwa matoorro Waad qiyaasi kartaa qadarka dareeraha maraya tuubo si aad u maamusho. Dhamaan waad ku mahadsan tahay wareeg fudud oo leh walxahan iyo kuwa kale aaladaha elektarooniga ah ee ku habboon la socda Arduino. Hadda waxaa la joogaa in yar oo hore loo sii socdo si laguu siiyo suurtagalnimada inaad dareere dhaqaajiso, buuxinta / faaruqinta taangiyada, abuurista nidaamyo waraab, iwm.
1 Waa maxay bamka biyaha?
2 Qiimaha iyo halka laga iibsado
3 Sida matoorka biyaha u shaqeeyo
4 Isku dar mashiinka biyaha ee Arduino
Waa maxay bamka biyaha?
Runtii magaca bamka biyaha kuma habboona maadaama ay sidoo kale ku shaqeyn karto cabitaanno aan ahayn biyo. Si kastaba ha noqotee, bamka biyaha waa aalad awood u leh soo saarista qulqulka dareeraha iyadoo la isticmaalayo tamarta dareeraha. Sidaa darteed, waxay leedahay waxyaabo aasaasi ah:
Galitaanka: halka dareeraha laga nuugo.
Baabuur + Baahiye: kan masuulka ka ah soo saarista tamarta dhaqaaqa ee biyaha ka soo saarta marinka una sii mariya marinka.
Salida: waa qaadashada ay ka soo baxayaan dareeraha ay ku riixeyso awoodda bamka biyaha.
Kuwaas bambooyin Haydarooliga waxaa loo adeegsadaa mashaariic fara badan iyo qalab. Laga soo bilaabo warshadaha, mashiinnada biyo siinta, nidaamyada waraabka ee otomaatiga ah, waraabka rusheeyaha, nidaamyada bixinta, dhirta daaweynta, iwm. Sababtaas awgeed, waxaa jira tiro moodooyin badan oo suuqa yaalla, oo leh awoodo iyo awoodo kala duwan (oo lagu cabiro litir saacaddiiba ama la mid ah). Laga soo bilaabo kan ugu yar, kan ugu weyn, biyaha wasakhda ah ama biyo nadiif ah, qoto dheer ama dusha sare, iwm.
Sida for astaamaha Kuwa ay tahay inaad fiiriso waa:
Awoodda: waxaa lagu cabiraa litir saacaddii (l / h), litir daqiiqaddii (l / min), iwm. Waa xaddiga biyaha ah ee ay soo saari karto cutubkiiba.
Saacadaha nolosha waxtarka leh- Waxay cabireysaa inta jeer ee ay u socon karto si isdaba-joog ah dhibaato la'aan. Da 'weyn oo ay tahay, ayaa ka sii fiican. Badanaa waa 500 saacadood, 3000 saacadood, 30.000 saacadood, iwm.
Buuq: Waxaa lagu cabiray dB, waa xaddiga buuqa uu sameeyo markuu shaqeynayo. Tani muhiim maahan, ilaa aad rabto inaad aamusnaato mooyee. Xaaladda noocaas ah, raadi mid leh <30dB.
Ilaalinta: inbadan waxay leeyihiin IP68 difaac (elektaroniga waa biyuhu xireen), taas oo macnaheedu yahay inay hoos gali karaan (nooca amphibious), sidaa darteed waxay ku hoos jiri karaan dareeraha dhib la'aan Kuwa kale, dhanka kale, waa dusha oo kaliya tuubada laga galo ayaa la quusin karaa iyada oo ay ka nuugayso biyaha. Hadday yihiin kuwa aan quusin karin oo aad hoostiisa geliso dareeraha way dhaawacmi doontaa ama wareeg gaaban ayay yeelan doontaa, haddaba fiiro gaar ah u yeelo tan.
Wiish istaatiko ah: waxaa badanaa lagu cabiraa mitirro, waa dhererka uu dareeraha ku kicin karo. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay haddii aad u isticmaali doontid inaad cabitaanno sare ugu qaaddo ama aad biyo uga soo saarto ceelasha, iwm. Waxay noqon kartaa 2 mitir, 3m, 5m, iwm.
Isticmaal- Waxaa lagu cabiraa watts (w) waxayna muujin doontaa xaddiga awoodda ay u baahan yihiin inay ku shaqeeyaan. Xaalado badan iyagu waa kuwo waxtar badan, waxay lahaan karaan isticmaalka 3.8W ka badan ama ka yar (kuwa yar yar).
Dareerayaasha la aqbalo: Sidii aan idhi, waxay aqbalaan dhowr nooc oo cabitaanno ah, in kasta oo aaney dhammaantood ahayn. Haddii aad rabto inaad hubiso in bamka aad soo iibsanaysaa uu ku shaqeyn karo dareeraha aad wax ka qabanayso, hubi faahfaahinta soo-saaraha. Guud ahaan waxay si fiican ugu shaqeyn karaan biyaha, saliida, asiidhyada, xalalka alkaline, shidaalka, iwm.
Nooca mootada: Kuwani badanaa waa matoorrada korantada ee DC. Nooca burush la'aanta ah (oo aan lahayn burush) ayaa si gaar ah wanaagsan oo waaraya. Waxay kuxirantahay awooda mashiinka waxaad heleysaa mashiin leh awood kabadan ama kayar iyo sare uqaadis.
Nooca dacaayadaha: matoorku wuxuu leeyahay barooro ku xiran usheeda dhexe, taas oo ah tan dhalisa tamarta dhexe si ay u soo saarto dareeraha. Kuwani waxay noqon karaan noocyo kala duwan, xawaaraha iyo socodka uu la shaqeynayo mashiinka ayaa ku xirnaan doona. Xitaa waa la daabacan karaa iyadoo la adeegsanayo daabacaadda 3D oo leh natiijooyin kala duwan iyadoo kuxiran qaabkooda. Waxaan kaaga tagayaa fiidiyaha xiisaha leh ee soo socda oo ku saabsan:
Macluumaad dheeri ah gudaha Wax walba.
Caliber: godka laga galo iyo godka laga galo wuxuu leeyahay cabir gaar ah. Tani waa muhiim marka ay timaado la jaanqaadida tubooyinka aad isticmaali doontid. Si kastaba ha noqotee, waxaad uheli kartaa adapters-ka cabiraadaha kaladuwan ee kaladuwan.
Dheecaannada ku xeeran wareega dhexe (radial vs axial)In kasta oo ay jiraan noocyo kale, labadan ayaa guud ahaan loo adeegsadaa barnaamijyadan gudaha ka socda. Way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay sida kiciyaha uu ujiifsan yahay garbaha, isagoo dareeraha ku riixaya centrifugally ama peripheral. (wixii macluumaad dheeraad ah ka eeg qaybta ku saabsan "Sidee matoorka biyaha u shaqeeyaa")
Laakiin iyadoon loo eegin nooca iyo waxqabadka, had iyo jeer koronto lagu xakameeyo. Adiga oo quudinaya matoorrada kiciya kiciyayaashu si ay u dhaliyaan xoog jireed, isticmaalkooda waa la xakamayn karaa. Sidaa darteed, bambooyin yaryar (ama kuwa waaweyn oo leh gudbiyeyaal ama MOSFETs) ayaa loo isticmaali karaa in lagu qalabeeyo nidaamyada haydaroolka leh Arduino.
Sida ku saabsan codsiyada, waxaan horay u soo sheegay qaar ka mid ah. Laakiin ka fikir inaad la abuuri karto mashruuc fudud oo adiga kuu gaar ah Arduino. Tusaale ahaan, halkan ayaan kaaga tagayaa wixii fikrado ah:
Qalab yar oo guriga lagu sameeyo si loo barto sida dhirta daaweynta dhabta ahi u shaqeeyaan.
Nidaamka cabbirka oo biyaha ku ogaada aaladda dareeraha isla markaana dhaqaajisa matoorka biyaha si uu u daadiyo.
Nidaam waraabinta dhirta otomaatig ah oo leh saacad.
Ugudbinta dareeraha hal meel una wareejiso meel kale. Nidaamyada isku dhafka dareeraha, iwm.
Qiimaha iyo halka laga iibsado
Bamka biyaha waa qalab fudud, ma laha sir badan. Sidoo kale, € 3-10 waad awoodaa iibsato qaar ka mid ah bambooyin elektaroonig ah oo ugu fudud oo u jira Arduino, in kastoo ay jiraan kuwo ka qaalisan haddii aad rabto awoodo sare. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa kuwan:
12v bamka quusin kara oo leh 240 l / saacadiiba iyo 3m wiish ma guurto ah
12v UEETEK bamka quusin karo oo leh 10 l / min awood iyo 5m wiish ma guurto ah
240l / h saliida biyaha hoostooda lagu shubi karo iyo mini-bamka biyaha, oo leh wiish 3m ah.
12V bamka biyaha la quusin karo oo leh 5m kor u kac ah iyo 600 l / h.
24V mashiinka quusin karo oo leh cirka sare ee 5m iyo 1300 l / h.
Bamka la quusin karo oo leh 220 / 240v fiilo leh awood dhan 1500l / h iyo 2m oo wiish ma guurto ah.
Bamka yar ee biyaha lagu shubo oo 2.5-6v 80-120 l / h
Bamka yar ee aadka u hooseeya ee leh ilaa 3.5m wiish iyo 7.5 l / min awoodda
JOYKK bamka biyaha ee yar-yar 2.5-6V oo leh awood 80-120 l / h
Sida matoorka biyaha u shaqeeyo
Bamka biyaha lagu shubo waxay ku shaqeysaa qaab aad u fudud. Waxay leedahay baare ku xiran matoorka, sidaasna tamarta ugu wareejineysa dareeraha maraya bladooda, sidaasna uga soo rogaya ilinka ilaa galka.
Kuwa ka mid ah nooca axial, Biyuhu waxay galayaan qolka bamka halka uu buufiyuhu ku yaalo bartamaha, wuxuu kordhiyaa tamarta firfircoonida markuu ka gudbo walxahaas oo xawaare sare ku wareegaya. Kadib waxay uga bixi doontaa qolka qumman iyada oo loo marayo bixitaanka.
En radial, garbaha waxay ku rogmadaan afaafka hore ee furitaanka waxayna biyaha ku ridi doonaan marinka sida iyagoo ah giraangir biyo ah. Tani waa sida ay ugu dhaqaajin doonaan biyaha kiiskan kale.
Isku dar mashiinka biyaha ee Arduino
Sidaad ogtahay, waad isticmaali kartaa Relay ah hadaad ubaahantahay. Laakiin halkan, si loogu daro bamka biyaha ee Arduino waxaan doortay MOSFET. Gaar ahaan module IRF520N. Xiriirinta, runta ayaa ah inay fududahay, kaliya raac talooyinkaan:
SIG ee moduleka IRF520N wuxuu ku xirnaan doonaa biinanka Arduino, tusaale ahaan D9. Waxaad horeyba u ogayd in haddii aad bedesho, waa inaad sidoo kale beddeshaa nambarka sawir si aad u shaqeyso.
Vcc iyo GND qaybta 'IRF520N' waxaad ku xidhi kartaa iyaga 5v iyo GND oo ah guddigaaga Arduino.
U + iyo U- Halkani waa meesha aad ka xidhi doonto labada waayir ee ka imanaya bamka biyaha. Haddii gudaha gudaheeda aan magdhow laga bixin, waa culeys wax ku ool ah, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho diode duulimaad ah oo udhaxeeya labada fiilooyin.
Vin iyo GND Waa meesha aad ku xiri doonto sariirta iyo baytariyada aad u isticmaali doonto inaad ku shubto mashiinka biyaha bannaanka, ama batteriga, korontada ama wax kasta oo aad isticmaali doonto si aad ugu xoojiso ...
Intaa ka dib wax walba waa la soo ururin doonaa waxayna diyaar u yihiin inay ka bilowdaan koodhka isha. Si tan loo sameeyo, gudaha Arduino bixisaa waa inaad abuurtaa barnaamij la mid ah kuwan soo socda:
Xaaladdan oo kale si fudud shid bamka iyo waxay shaqeysaa 10 daqiiqo. Laakiin waad ku dari kartaa lambar dheeri ah, dareemayaal, iwm, oo aad ku xakameyn kartaa iyada oo ku saleysan soo saarida dareeraha huurka, adoo adeegsanaya saacadaha, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Bamka biyaha loogu talagalay Arduino: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
1n4007: wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato diode-kan
CTC 101: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato barnaamijkan